Yesu, Amanaman Mufo, ne “Nkraman Mma” (Mateo 15) | Ansa na Paulo Benya Po so Akwanhyia (Asomafo Nnwuma 27)
Yesu mfatoho a ɛfa “nkraman mma” ho no, na ɛyɛ animtiaabu anaa?
Nkaedum; ɛyɛ Helani anaa Romani abofra a okura kraman ba (afeha a edi kan A.Y.B. besi afeha a ɛtɔ so mmienu Y.B.)
Bere bi, Yesu pue fii Israel kɔɔ Siria a ɛwɔ Roma mantam mu. Ɔwɔ hɔ no, ɔbaa bi a ɔyɛ Helani bebisaa ne hɔ mmoa. Bere a Yesu rema ɔbaa no mmuae no, ɔyɛɛ mfatoho bi. Ɛte sɛ nea na ɔde wɔn a wɔnyɛ Yudafo no retoto “nkraman mma” ho. Mose Mmara mu no, na wobu nkraman sɛ wɔn ho ntew. (Leviticus 11:27) Enti na Yesu pɛ sɛ obu Helani baa no ne wɔn a wɔnyɛ Yudafo animtiaa anaa?
Ɛnte saa koraa. Yesu kyerɛkyerɛɛ mu kyerɛɛ n’asuafo no sɛ, saa bere no, Yudafo na na ɛsɛ sɛ odi kan boa wɔn. Wei nti na ɔmaa Helani baa no mfatoho sɛ: “Ɛnyɛ papa sɛ wɔbɛfa mmofra paanoo atow ama nkraman mma.” (Mateo 15:21-26; Marko 7:26) Helafo ne Romafo mu no, na kraman yɛ afieboa a wɔpɛ n’asɛm paa, na na mmofra ne no di agorɔ. Enti “nkraman mma” a Yesu de dii dwuma no, obi te a, ɛnyɛ animtiaabu na na ɛbɛba n’adwenem. Mmom obehu sɛ wɔn a wɔnyɛ Yudafo no nso ho hia, na Yesu dwen wɔn ho. Enti Helani baa no gyinaa Yesu asɛm no so kaa sɛ: “Ɛyɛ ampa, Awurade; nanso nokwasɛm ne sɛ nkraman mma no di mporoporowa a efi wɔn wuranom pon so gu fam no.” Yesu kamfoo ɔbaa no sɛ wada gyidi kɛse adi, na ɔsaa ne babaa no yare.—Mateo 15:27, 28.
Bere a ɔsomafo Paulo kaa sɛ wɔntwɛn kakra ansa na wɔatoa akwantu no so no, na nyansa wom anaa?
Taaboo bi a wɔayɛ po so hyɛn mfonini wɔ so; ɛyɛ hyɛn a wɔde fa nneɛma (afeha a edi kan Y.B.)
Ná Paulo te po so hyɛn mu rekɔ Italy, na na mframa kɛse bi rebɔ hyia wɔn. Bere a wogyinaa wɔ baabi no, ɔsomafo no tuu nnipa a aka no fo sɛ, wontu akwantu a aka no nhyɛ da foforo. (Asomafo Nnwuma 27:9-12) Nea Paulo kae yi, na nyansa wom anaa?
Tete no, na wɔn a wɔyɛ adwuma wɔ po so hyɛn mu no nim sɛ, sɛ edu awɔw bere a, ɛyɛ hu sɛ wubetu kwan wɔ Mediterranea po no so. Efi bɛyɛ November 15 kosi bɛyɛ March 15 no, na wobu no sɛ, ɛnsɛ sɛ obiara fa po so. Nanso bere a Paulo kaa sɛ mma wɔmfa po so no, na ɛyɛ bɛyɛ September anaa October. Vegetius yɛ Roma kyerɛwfo bi a ɔtenaa ase bɛyɛ mfe ahasa wɔ asomafo no wu akyi. Ɔkyerɛw faa po so akwantu ho sɛ: “Abosome bi wɔ hɔ a, ɛyɛ ma akwantu. Abosome bi nso, ɛyɛ hu. Nanso abosome a aka no deɛ, wuntumi mfa po so.” (Epitome of Military Science) Vegetius kyerɛe sɛ, efi May 27 kosi September 14 na na ɛyɛ ma po so akwantu; nanso mmere a na ɛyɛ hu sɛ obi bɛfa po so ne September 15 kosi November 11 ne March 11 kosi May 26. Ná Paulo taa fa po so, enti akyinnye biara nni ho sɛ na onim asɛm yi. Ebetumi aba sɛ hyɛn wura no ne nea na ɔreka hyɛn no nso nim asɛm yi, nanso wɔantie Paulo afotu no. Enti po so hyɛn no konyaa akwanhyia.—Asomafo Nnwuma 27:13-44.
Yesu Saa Abayewa Bi ne Ɔsotifo Bi Yareɛ
Bere a Yesu de ɔbaa bi kuromfo totoo nkraman mma ho no, dɛn nti na anha ɔbaa no?
So Wunim?—Ɔwɛn-Aban No. 5 2017